MTU Promotion and Transfer – Mandalay Technological University
MTU Promotion and Transfer
September 18 @ 8:00 am - October9@ 5:00 pm
« Calling LOGO Design for Myanmar-Vietnam Young Scientists Network (MVYSN)
Call for Application : ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF) »
၁။ မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်ရှိ အင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ၊ ဇီဝနည်းပညာ၊ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ အင်ဂျင်နီယာသင်္ချာ၊ အင်ဂျင်နီယာဓာတုဗေဒ၊ အင်ဂျင်နီယာရူပဗေဒ၊ အင်ဂျင်နီယာဘူမိဗေဒ ဘာသာရပ် ဌာနများတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံသော မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် အဆင့်မြင့် ပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များမှ ရာထူးတိုးမြှင့်လျှောက်ထားလိုသူ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြများနှင့် ပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထား လိုသူများသည်(အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ် အလိုက် အနည်းဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် နှစ်သတ်မှတ်ချက် အသားတင်ကာလပြည့်မီသူ) ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြများသည် သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခချုပ်၊ ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှတစ်ဆင့် မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ထံလိပ်မူ၍ အထောက်အထားများ ပြည့်စုံစွာဖြင့် (၉-၁၀-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၂။ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ သိရှိလိုပါက မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၏ Website : www.mtu.edu.mm တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။
၃။ သတ်မှတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်ပြီး တင်သွင်းသည့် လျှောက်လွှာများနှင့် အချက်အလက်ပြည့်စုံ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ထားခြင်းမရှိသော လျှောက်လွှာများကို လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။
၄။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် ဌာနကြီးမှူး(စီမံ-ဘဏ္ဍာ) ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၄၃၀၈၄၀၀၇) ၊ ဌာနမှူး(စီမံ-ဘဏ္ဍာ) ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၀၅)၊ ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၇၉၀၁၈၈၀၂၃) နှင့် စီမံရေးရာဌာန (၀၂-၄၀၅၇၀၀၆) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ရာထူးခေါ်စာနှင့်သတ်မှတ်ပုံစံများကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန အောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်များသို့ e-mail ဖြင့်လည်း ဖြန့်ဝေပေးပို့ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
MTU သို့ ရာထူးတိုး/ပြောင်း လျှောက်ထားပြီးသူများမှ NCSE Proceeding Paper များ တင်ပြရန် ကျန်ရှိပါက (မာတိကာ၊ မျက်နှာဖုံး၊ စာတမ်းအပြည့်အစုံ) ဖြင့် ၂၇.၁၀.၂၀၂၀ ရုံးချိန်တွင်း နောက်ဆုံးထား၍ စီမံရေးရာ ဌာနသို့ ပေးပို့ပါရန် အကြောင်းကြားပါသည်။
The required documents can be downloaded as below:
၂။ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် အဆိုပြုလွှာ
၃။ ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် လျှောက်ထားသူဖြည့်စွက်ရန် ပုံစံ
၄။ တွဲဖက်ပါမောက္ခနှင့် အထက် အကဲဖြတ်မှတ်တမ်း
The applicants need to submit both the soft copy via mail: mtu_promotion_transfer@mtu.edu.mm
and the hard copy with the completed data to: Administration office, Mandalay Technological University, Patheingyi, Mandalay.
ဌာနကြီးမှူး(စီမံ-ဘဏ္ဍာ) ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၄၃၀၈၄၀၀၇)
ဌာနမှူး(စီမံ-ဘဏ္ဍာ) ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၄၄၄၀၃၁၈၀၅)
ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) ဖုန်းနံပါတ်- (၀၉-၇၉၀၁၈၈၀၂၃)
စီမံရေးရာဌာန ဖုန်းနံပါတ်- (၀၂-၄၀၅၇၀၀၆)
သုတေသနစာစောင်အချက်အလက်နှင့် ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက စုံစမ်းရန်
(ERC ဒု ဥက္ကဌ) ဒေါက်တာသော်ထွန်းကို (၀၉-၂၁၃၂၇၈၀)
(ERC Secretary) ဒေါက်တာကောင်းကျော် (၀၉-၅၁၅၉၆၀၅)
Schedule Announcement for AP to P Updated Lists
Application forms of Promotion and Transfer can be downloaded here and submitted them by 9th October, 2020.
Schedule Announcements for Presentation/ Interview of Promotion/ Transfer at MTU (Updated 21.10.2020)
Call for Application : ASEAN-India Research Training Fellowship (AIRTF)
Call for Papers 3rd Joint International Conference on Science, Technology and Innovation, Mandalay with Japan Universities & Company Research Group, 2020